प्राधिकरण - म्याग्नेशियम L-Threonate पूरक: लाभ, खुराक
घर > म्याग्नेशियम L-Threonate पूरक
यदि तपाईं राम्रो खोज्दै हुनुहुन्छ म्याग्नेशियम L-Threonate पूरक, हामी Cofttek बाट म्याग्नेशियम Threonate पाउडर खरीद सिफारिस गर्दछौं। कम्पनीको दाबी छ कि यसले शरीरमा म्याग्नेशियमको जैविक उपलब्धता बढाउँदछ। कम्पनीले यो दाबी पनि गर्छ कि कम्पनीले प्रदान गरेको पाउडरले मेमोरी फंक्शन समर्थन गर्दछ र समग्र संज्ञानात्मक कार्यलाई बढाउँदछ। ती प्रयोगकर्ताहरूलाई राम्रोसँग सुत्न पनि मद्दत गर्छन्। Cofttek म्याग्नेशियम L-Threonate आपूर्तिकर्ता हो जसले तपाईंलाई मात्र अत्यधिक प्रभावकारी बेच्नेछ उत्पादनहरु.
Mag nesium L-Threonate के हो?
मैग्नीशियम एल थ्रोनेट को लागी के हो?
के म्याग्नेशियम थ्रोनेट अझ राम्रो छ?
के म्याग्नेसियम ग्लाइसिनेट म्याग नेसियम साइट्रेट भन्दा राम्रो छ?
तपाईले कुन औषधी म्याग्नीशियमको साथ लिनुहुन्न?
के म्याग्नेशियमले पप बनाउँछ?
म्याग्नीशियम एल थ्रोनोनेट कति मिग्राम लिन पर्छ?
कुन म्याग्नेशियम चिन्ताका लागि उत्तम छ?
के म्याग्नीशियमले मस्तिष्क कुहिरोलाई मद्दत गर्न सक्छ?
के म्याग्नेशियमले दिमागलाई निको पार्छ?
के म्याग्नीशियमले डिमेंशियाको कारण बनाउँछ?
के म्याग्नीशियम एल Threonate रक्तचापको लागि राम्रो छ?
दैनिक लिनको लागि उत्तम म्याग्नेशियम कुन हो?
म्याग्नीशियम साइट्रेट र म्याग्नेशियम ग्लुकोनेटबीच के भिन्नता छ?
कुन म्याग्नेशियम मांसपेशियों को ऐंठनको लागि उत्तम हो?
के मैग्नीशियम चिन्ताको लागि राम्रो छ?
कुन म्याग्नेशियम निद्राको लागि उत्तम छ?
म्याग्नीशियममा कुन खाद्य पदार्थहरू उच्च छन्?
मैग्नीशियम लिने दीर्घकालीन प्रभावहरू के हुन्?
के सबै म्याग्नीशियमले पखाला फैलाउँछ?
म्याग्नेशियम एल Threonate काम गर्न कति समय लाग्छ?
के म्याग्नेशियमले अल्जाइमरको कारण गर्छ?
कम म्याग्नीशियमका लक्षणहरू के-के हुन्?
के भिटामिन डीले अल्जाइमर रोक्न सक्छ?
कुन म्याग्नेशियम स्नायुहरूको लागि उत्तम हो?
बिहान वा रातमा म्याग्नेशियम लिनु राम्रो हो?
के मैग्नीशियम पिन्च नर्वहरूको लागि राम्रो छ?
के म्याग्नेशियमले कम्पनिको मद्दत गर्न सक्छ?
के मैग्नीशियम पार्किन्सनको लागि राम्रो छ?
शरीरमा कम म्याग्नीशियमका लक्षणहरू के हुन्?
के हल्दीले पार्किन्सन रोगलाई सहयोग गर्दछ?
पार्किन्सन रोग बिग्रेको कुरा के हो?
के म्याग्नीशियमले मेमोरीमा असर गर्छ?
के मैग्नीशियमले अक्सीजनमा सहयोग पुर्‍याउँछ?
के म्याग्नेशियमले सेरोटोनिन बढावा दिन्छ?
के मैग्नीशियमले उर्जा दिन्छ?
उत्तम म्याग्नेशियम एल Threonate के हो?
मैग्नीशियम ग्लासिनेट किन राम्रो छ?
के म्याग्नेशियम ग्लाइसिनेट म्याग्नीशियम जस्तै छ?
के म्याग्नेशियम ग्लाइसिनेटले तपाईंलाई पप गर्न मद्दत गर्दछ?
उपचार गर्न म्याग्नीशियम ग्लासिनेट भनेको के हो?
तपाईंले म्याग्नीशियमको साथ के लिनुहुन्न?
तपाईंले कहिले म्याग्नेशियम लिनुहुन्न?
म म्याग्नीशियम कम छ भने मलाई कसरी थाहा छ?
बिस्तर हुनुभन्दा कति समय अघि मैले म्याग्नीशियम लिनु पर्छ?
कुन भिटामिन तपाईंले सँगै खानु हुँदैन?
के मैग्नीशियम एल Threonate चिन्ताको लागि राम्रो छ?
कुन प्रकारको म्याग्नेशियम उत्तम रूपमा अवशोषित हुन्छ?
के म म्याग्नीशियम दीर्घ अवधि लिन सक्छु?
म्याग्नेशियमले मल त्यागलाई कसरी असर गर्छ?
तपाईले दिनमा कति पटक म्याग्नीशियम लिनु पर्छ?
म्याग्नीशियम शोषण गर्ने उत्तम तरिका के हो?
हामीलाई म्याग्नीशियम L-Threonate किन चाहिन्छ?
मैग्नीशियम एल-थ्रोनेट साइड इफेक्ट के हो?
म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेटको फाइदा के हो?
म म्याग्नेशियम एल Threonate कहाँ किन्न सक्छु?
के क्याल्सियम र म्याग्नेशियम सँगै वा अलग लिनु पर्छ?
थेरोनिक एसिड पानीमा घुलनशील यौगिक हो जुन भिटामिन सीको मेटाबोलिक बिच्छेदनबाट प्राप्त हुन्छ। म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट शरीर सजिलैसँग अवशोषित हुन्छ र यसैले म्याग्नीशियम मस्तिष्ककोषहरू र शरीरका अन्य भागहरूमा पुग्नको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका हो। म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट द्वारा प्रदान गरिएको म्याग्नेशियमले बी भिटामिनको सक्रियता, इन्सुलिन स्राव, एटीपी गठन र प्रोटीन र फ्याट्टी एसिड गठन सहित धेरै महत्वपूर्ण जैव रासायनिक कार्य गर्दछ। खनिजले पनि धेरै एन्जाइमहरूको उचित सञ्चालनलाई सुविधा पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले प्राकृतिक किलर कोषहरू र साइटोटोक्सिक टी-लिम्फोसाइट्सको एन्टि-भाइरल र एन्टी-ट्यूमर प्रभावहरू बढाउँदै प्रतिरक्षा प्रणालीको कार्य बढाउँछ।
माथि उल्लेख गरिएझैं खनिजमा प्राकृतिक रूपमा खनिज पदार्थहरू मार्फत म्याग्नीशियम प्राप्त गर्न सकिन्छ। केहि खाद्य पदार्थहरू जसमा म्याग्नेशियम अधिक मात्रामा हुन्छ डार्क चकलेट, एभोकैडो, नट, फलफूल, टोफु, कद्दू र चिया बीज, फ्याट माछा, आदि। यद्यपि प्राकृतिक स्रोतहरूको माध्यमबाट आपूर्ति गरिएको म्याग्नीशियम प्रायः विभिन्न जैव रसायनिक कार्यहरू ठीकसँग राख्न पर्याप्त हुँदैन। यसैले गत केही वर्षमा म्याग्नीशियम एल-थ्रोनेट सप्लीमेन्टहरूको माग बढेको छ।
म्याग्नीशियम L-Threonate मस्तिष्क विकारहरूको प्रबन्ध गर्न उपयोगी छ। ड्रगले दिमाग कोषहरूमा म्याग्नीशियमको एकाग्रता बढाउँदछ।
म्याग्नेशियम L-Threonate खरीद यसको Nootropic लाभहरूको लागि हो। यसले एपिसोडिक मेमोरी, सीख्ने, र बृद्धि गर्ने एकाग्रता बढाउँदछ। पूरक आयु-सम्बन्धित स्मृति हानि, एडीएचडी, डिमेन्शिया, र अल्जाइमर रोगबाट पीडित बिरामीहरूका लागि पर्चेको खुराक हो।
प्राथमिक लाभsम्याग्नेशियम L-Threonate को स्मृति मा एक सुधार हो। यसले सिन्याप्टिक घनत्व र प्लास्टिकसिटी बृद्धि गर्नका साथै मस्तिष्क भित्र न्युरोट्रान्समिटर रिलीज साइटहरूको समग्र संख्या वृद्धि गर्न सक्षम छ।
यस पूरकले स्थानिक मेमोरी सुधार गर्न पनि सक्षम छ। एउटा मुसा अध्ययनमा, म्याग्निसम L-Threonate लिने २ 13 दिन पछि कार्यरत मेमोरी १ 24% ले सुधार भयो। Lement० दिन पूरक भएपछि, उमेरका मुसाले उनीहरूको कन्सिपरेटहरू जस्तै समान स्तरमा प्रदर्शन गर्न सक्षम भए।
यसको मतलब यो हो कि जब यो पूरकले दुवै युवा र बुढा विषयहरूमा संज्ञानात्मक समारोह वृद्धि गर्न सक्षम छ, यो वृद्धहरूको लागि यति धेरै सुधार भयो। वास्तवमा, वृद्ध मुसाले १%% को सुधार दर देख्यो जुन सानो मुसामा १ 19% सुधारको तुलनामा महत्वपूर्ण छ। वृद्ध जनसंख्यालाई स्मृति गुम्ने समस्या हुने सम्भावना धेरै भएमा, यो पूरकले बुढेसकालका व्यक्तिहरूका लागि प्रभावशाली प्रभावहरू ल्याउँदछ।
यदि तपाईं विशेष गरी दिमागको स्वास्थ्य बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने मैग्नीशियम एल-थ्रोनेट तपाईको लागि आदर्श म्याग्नीशियम फारम हुन सक्छ। जबकि यसले सामान्यतया शरीरभरि म्याग्नीशियमको स्तर बढाउन सक्छ, म्याग्नीशियमको यस प्रकारको साथ मस्तिष्कमा प्रभाव अझ प्रबल हुन सक्छ।
जहाँ म्याग्नेशियमका धेरै प्रकारहरू उपलब्ध छन्, हामी प्राय: म्याग्नीशियम साइट्रेट र / वा म्याग्नेशियम ग्लाइसिनेट प्रयोग गर्न रुचाउँछौं। कब्जबाट पीडित व्यक्तिहरूको लागि म्याग्नीशियम साइट्रेट सबैभन्दा उपयोगी छ, जबकि ग्लाइसिनेट फारम चिन्ता, अनिद्रा, दीर्घकालीन तनाव, र भ्रामक अवस्था जस्ता परिस्थितिहरूको लागि अधिक उपयोगी छ।
यी औषधीहरूको साथ म्याग्नीशियम लिने रक्तचाप पनि कम कम हुन सक्छ। यी औषधिहरू मध्ये केहीले निफेडिपाइन (अलालत, प्रोकार्डिया), भेरापामल (क्यालन, ईसोप्टिन, भेरेलन), डिल्टियाजेम (कार्डिसेम), इस्राडाइपिन (डायनाक्रिक), फेलोडाइपिन (प्लेन्डिल), एम्लोडाइपिन (नोरभास्क), र अन्य समावेश गर्दछ।
मल नरम: म्याग्नेशियमले एक आस्मोटिक रेचकको रूपमा काम गर्ने, आन्द्रामा पानी निकाल्छ। पानीमा भएको यो वृद्धि आँखा गतिशीलता उत्तेजित गर्दछ। यो मलको आकार नरम र बढाउछ, मलको आन्दोलन ट्रिगर गर्दछ र मललाई सजिलो बनाउनको लागि मद्दत गर्दछ।
म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट एक मौखिक औषधि हो र ट्याब्लेट वा पाउडरको रूपमा लिन सकिन्छ। म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट वा औषधिको सही खुराक व्यक्ति लिने व्यक्तिको उमेर र स्वास्थ्यमा निर्भर गर्दछ साथै यो उद्देश्यको लागि जुन औषधि लिइरहेको छ। सामान्यतया, १ and र between० बीच उमेरका महिलाहरुलाई प्रति दिन 19१० मिलीग्रामको खुराकमा राख्न सिफारिस गरिन्छ र समान उमेर समूहका पुरुषहरूले दिनहुँ mg०० मिलीग्रामको खुराक लिनु पर्छ। ठूला पुरुषहरूले आफ्नो खुराक दिनको 30२० मिलिग्रामसम्म बढाउन सक्दछन् र त्यो उमेर समूहका महिलाहरूले results 310० मिलीग्राम म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेटको उत्तम परिणामका लागि प्रत्येक दिन उपभोग गर्नुपर्दछ। स्तनपान गराउने महिलाले पनि यो औषधि सेवन गर्न सक्छन्। जे होस्, तिनीहरूले दैनिक म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेटको int२० मिलीग्राम भन्दा कमको दैनिक सेवन गर्नु पर्छ।
यदि तपाईं म्याग्नेशियम एल-थ्रोनोटेटलाई विशिष्ट सर्तहरूको लागि लिइरहनु भएको छ भने, तपाईंले आफ्नो खुराक समायोजन गर्नु पर्नेछ जुन उद्देश्यको लागि ड्रग भइरहेको छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं पाचन सम्बन्धी मुद्दाहरूको लागि म्याग्नेशियम L-थ्रोनोटे लिदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई दिनहुँ -400००-१२०० मिग्रि लिन सिफारिस गरिन्छ। यदि तपाइँ संज्ञानात्मक समारोह लाई बढावा दिन पूरक लिइरहनुभएको छ भने, तपाइँले प्रति दिन १००० मिलीग्राम म्याग्नीशियम L-थ्रोनेट खपत गर्नुपर्छ। राम्रो निद्रा को लागी, पुरुषहरु को लागी nes००- mg२० मिलीग्राम म्याग्नीशियम L-थ्रोनोटे पर्याप्त छ र 1200 १०० देखि mg 1000० मिलीग्राम महिलाहरुको लागी पर्याप्त छ।
शरीरलाई यो अवशोषित गर्न सजिलो बनाउन म्याग्नेशियम प्राय: अन्य पदार्थहरूमा बाँधिन्छ। विभिन्न प्रकारका म्याग्नेशियम यी बन्धन पदार्थहरू अनुसार वर्गीकृत गरिएको छ। विभिन्न प्रकारको म्याग्नेशियमले समावेश गर्दछ:
म्याग्नेशियम ग्लाइसिनेट प्राय जसो मांसपेशी दुखाई कम गर्न प्रयोग गरिन्छ।
म्याग्नेशियम अक्साइड। सामान्यतया माइग्रेन र कब्जको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
म्याग्नेशियम साइट्रेट सजिलै शरीर द्वारा अवशोषित र कब्ज को उपचार गर्न प्रयोग।
म्याग्नेशियम क्लोराइड सजिलै शरीर द्वारा अवशोषित। S
म्याग्नेशियम सल्फेट (Epsom नुन)। सामान्यतया, कम सजीलो शरीर द्वारा अवशोषित तर छाला मार्फत अवशोषित गर्न सकिन्छ।
म्याग्नेशियम ल्याक्टेट। अक्सर खाना योजकको रूपमा प्रयोग हुन्छ।
अध्ययनको २०१ 2017 समीक्षाका अनुसार, म्याग्नेशियम र चिन्ताको बारेमा अधिक प्रासंगिक अध्ययनहरूले म्याग्नीशियम ल्याक्टेट वा म्याग्नेशियम अक्साइड प्रयोग गर्दछ। म्याग्नेशियम ग्लाइसिनेट सजिलैसँग अवशोषित हुन्छ र शान्त गुणहरू हुन सक्छ। यसले चिन्ता, उदासी, तनाव र अनिद्रालाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। अझै, यी प्रयोगहरूमा वैज्ञानिक प्रमाण सीमित छ, त्यसैले थप अध्ययनहरू आवश्यक छ। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट प्राय: यसको शान्त प्रभावका लागि चिन्ता, डिप्रेसन, र अनिद्राको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
सामान्यतया मस्तिष्क कुहिरो, धीमा अनुभूति वा एकाग्रता र मेमोरीको साथ कठिनाई को रूपमा चिनिन्छ सबै म्याग्नीशियमको कमी संकेत गर्न सक्दछ। म्याग्नीशियम दिमागको लागि एक आवश्यक पोषक तत्व हो, त्यसैले यो बिना मस्तिष्कले राम्रोसँग प्रदर्शन गर्न सक्दैन।
म्याग्नेशियमले एनएमडीए रिसेप्टर्सहरूको ढोकाको रूपमा काम गर्दछ, जो स्वस्थ मस्तिष्कको विकास, मेमोरी र सिकाइमा संलग्न छन्। यसले स्नायु कोषहरूलाई बढि रोक्नबाट रोक्छ, जसले उनीहरूलाई मार्न सक्छ र मस्तिष्कमा क्षति पुर्‍याउन सक्छ।
न्यूरोलोजी पत्रिकामा प्रकाशित एउटा नयाँ अध्ययनले देखायो कि दुबै उच्च र एकदम कम स्तरको म्याग्नेशियमले मानिसहरूलाई डिमेन्शिया हुने जोखिममा पार्न सक्छ।
यस प्रकारको म्याग्नेशियम रक्तप्रवाहमा जान्छ र तपाईंको रगत मस्तिष्क अवरोध पार गर्न सक्छ, सजिलैसँग कोशिका द्वारा अवशोषित हुन्छ र रक्तचाप कम गर्न र स्ट्रोक-रोकथाम पनि भएको छ।
म्याग्नीशियम साइट्रेट एक धेरै सामान्य म्याग्नीशियम फॉर्म्युलेसन हो र सजिलैसँग अनलाइन वा विश्वव्यापी स्टोरहरूमा किन्न सकिन्छ। केहि अनुसन्धानले सुझाव दिन्छ कि यो प्रकार मैग्नीशियमको सबैभन्दा जैवउपलब्ध रूपहरु मध्ये एक हो, यसको अर्थ यो हो कि यो सजिलै आफ्नो पाचन प्रणालीमा अन्य रूपहरू भन्दा सजिलै संगम गरीन्छ।
कब्जबाट पीडित व्यक्तिहरूको लागि म्याग्नीशियम साइट्रेट सबैभन्दा उपयोगी छ, जबकि ग्लाइसिनेट फारम चिन्ता, अनिद्रा, दीर्घकालीन तनाव, र भ्रामक अवस्था जस्ता परिस्थितिहरूको लागि अधिक उपयोगी छ।
म्याग्नेसियम यदि तपाईं एक पूरक प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ भने साइट्रेट सबैभन्दा प्रभावशाली प्रकार हुन सक्छ। यदि तपाईं म्याग्नेशियमको कमी हुनुहुन्छ भने, यस पोषक तत्वको सेवन बढाउँदा अन्य फाइदाहरू पनि हुन सक्दछन्। र अन्य उपचारहरू सहायता दिन सक्ने खुट्टा क्र्याम्पि forका लागि उपलब्ध छन्।
अनुसन्धानले सल्लाह दिन्छ कि चिन्ताका लागि म्याग्नीशियम लिनु राम्रोसँग काम गर्न सक्छ। अध्ययनले पत्ता लगाएको छ कि डर र आतंकका भावनाहरू ठूलो म्याग्नीशियम सेवनले उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न सकिन्छ, र राम्रो समाचार यो हो कि परिणामहरू सामान्यीकृत चिन्ता डिसअर्डरमा सीमित छैनन्।
म्याग्नेशियम ग्लाइसिनेट अक्सर निन्द्रा सुधार गर्न र हृदय रोग र मधुमेह सहित विभिन्न प्रकारका भ्रामक अवस्थाहरूको उपचार गर्न स्वसम्पूर्ण आहार पूरकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। म्याग्नेशियम ग्लाइसिनेट सजिलैसँग अवशोषित हुन्छ र शान्त गुणहरू हुन सक्छ। यसले चिन्ता, उदासी, तनाव र अनिद्रालाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईको मस्तिष्कमा म्याग्नीशियमको स्तर बढाउन म्याग्नेशियम एल-थ्रोनोनेट लिनको अलावा, तपाईं यी खनिजहरूमा समृद्ध खाद्यहरूको पनि फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। यी खानाहरूले तपाईंलाई दिमागमा आवश्यक म्याग्नीशियम स्तर प्राप्त गर्न र सबै खनिज लाभहरूको मजा लिन मद्दत गर्दछ। यहाँ केहि छन् म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट खानामा;
गाढा चकलेट– जति यो स्वादिष्ट र स्वस्थ छ, यसले m 64mg मैग्नीशियम बोक्छ जुन RDI को १%% हो। यस बाहेक, डार्क चकलेट पनि तामा, फलाम र मैंगनीजको साथसाथै प्रिबायोटिक फाइबरमा समृद्ध हुन्छ।
एवोकैडोस- यो स्वादिष्ट र पौष्टिक फलले तपाईंलाई 58 15 एमजी मैग्नीशियम प्रदान गर्न सक्दछ जुन लगभग १%% आरडीआई हो। फल पनि भिटामिन बी, के, र पोटेशियमको एक महान स्रोतमा समृद्ध छ।
Nutsare– पनि एक उत्तम म्याग्नेशियम L- थ्रोनेट प्राकृतिक स्रोतहरु को रूप मा परिचित। १ औंस सेवा गर्ने काजूसँग m२mg मैग्नीशियम हुन्छ जुन RDI को २०% हो।
मटर, दाल, छोला, र सोया सिमीका रूपमा लिग्युमेचु म्याग्नेशियमलगायत बिभिन्न खनिजहरूमा समृद्ध हुन्छन्। उदाहरण को लागी, एक कप पकाइएको सिमीमा १२०mg म्याग्नेशियम हुन्छ, र त्यो RDI को %०% हो।
त्यहाँ अन्य खाद्य पदार्थहरू जस्तै टोफु, चिया बीज, कद्दूको गेडाहरू, फ्याट माछा पनि केहि उल्लेख गर्न। यी म्याग्नीशियम युक्त फूडहरूको बारेमा थप जानकारीको लागि तपाईंको पोषण विशेषज्ञसँग परामर्श लिनुहोस्।
म्याग्नेशियम एक पोषक तत्व हो जुन शरीर स्वस्थ रहन आवश्यक छ। लामो अवधिको लागि म्याग्नेशियम लिनु शरीरमा थुप्रै प्रक्रियाहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ, मांसपेशिहरू र स्नायु कार्यहरू, रगतमा चिनीको स्तर, र रक्तचाप नियमित गर्ने र प्रोटिन, हड्डी, र डीएनए सहित।
प्राय: प्रायः डाईरिया लाग्न सक्ने म्याग्नेशियमका फार्महरूमा मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्लोराइड, ग्लुकोनेट र अक्साइड समावेश छ। पखाला र म्याग्नेशियम नुनको रेचक प्रभाव आन्द्रा र बृहदान्त्र मा unabsorbed लवण को osmotic गतिविधि र ग्यास्ट्रिक गतिशीलता को उत्तेजना को कारण हो।
मौखिक रूपमा इन्जेस्टेड MgT ले कम्तिमा एक महिना लिन मस्तिष्क म्याग्नेशियमको स्तर बढाउन देखा पर्दछ जुन मेमोरी गठनमा प्रभाव पार्न आवश्यक सीमासम्म।
डच अनुसन्धानकर्ताहरूले रिपोर्ट गरे कि म्याग्नीशियमको स्तर जुन अत्यधिक उच्च छ वा एकदम कम छ यसले तपाईंलाई अल्जाइमर र अन्य डिमेंशियाको लागि जोखिममा पार्न सक्छ।
जब शरीरमा म्याग्नेशियमको स्तर सामान्य भन्दा तल झर्छ, कम म्याग्नीशियमको कारणले लक्षणहरू विकास हुन्छन्। कम म्याग्नेशियमको सामान्य कारणहरू:
शरीरको ठूलो क्षेत्रलाई असर गर्ने बर्न्स
अत्यधिक पेशाब (पोलियुरिया), जस्तै अनियंत्रित मधुमेहमा र तीव्र किडनी असफलताबाट पुनःप्राप्तिको बखत
Hyperaldosteronism (विकार जसमा एड्रेनल ग्रंथि रक्तको हर्मोन एल्डोस्टेरोनको धेरै अधिक बाहिर निकाल्छ)
किडनी ट्युबुल विकारहरू
मालाब्सोरप्शन सिन्ड्रोमहरू, जस्तै सेलिआक रोग र ईन्फ्लेमेटरी आंत्र रोग
एम्फोटेरिसिन, सिस्प्लेटिन, साइक्लोस्पोरिन, डायरेटिक्स, प्रोटोन पम्प अवरोधक, र एमिनोग्लाइकोसाइड एन्टिबायोटिक्स सहितको औषधी
अग्नाशयशोथ (अग्न्याशयको सूजन र सूजन)
जनावर र विट्रो प्रयोगहरूले सुझाव दिन्छ कि भिटामिन डीसँग संज्ञानात्मक गिरावट र डिमेन्शियाको रोकथाम र उपचारको लागि उपचारात्मक सम्भाव्यता छ। दुई भर्खरको सम्भावित अध्ययनहरूले यो पनि सुझाव दिन्छ कि कम २ ((OH) D ले स्तरमा पर्याप्त संज्ञानात्मक गिरावटको जोखिम बढाउँदछ।
निर्माताको दावी छ कि म्याग्नीशियम पूरकले मांसपेशिको दुखाइलाई लड्न, निद्राको गुणस्तर सुधार गर्न, र चिन्ता र तनाव कम गर्न मद्दत गर्दछ। उनीहरूले यो पनि वर्णन गर्छन् कि म्याग्नेशियमको यो रूप (म्याग्नेशियम बिस्लीसाइनेट) खनिजको अन्य रूपहरू भन्दा पेटमा हल्का छ।
दिनको कुनै पनि समयमा म्याग्नीशियम पूरकहरू लिन सकिन्छ, जबसम्म तपाईं उनीहरूलाई स्थिर रूपमा लिन सक्नुहुनेछ। कसैको लागि बिहान सब भन्दा पहिले पूरकको खाना लिनु सब भन्दा सजिलो हुन सक्छ, जबकि अरूले उनीहरूलाई खाना खाने वा ओछ्यान अघि उनीहरूलाई राम्रोसँग काम गर्ने फेला पार्न सक्छन्।
म्याग्नेशियम - स्नायु प्रणाली स्वास्थ्य र सूजन कम गर्न को लागी एक महत्वपूर्ण खनिज।
म्याग्नेशियम (Mg) पूरक विभिन्न न्यूरोलॉजिकल डिसअर्डरहरूमा कार्यात्मक रिकभरीमा उल्लेखनीय सुधार गर्न देखाईएको छ। पेरिफेरल नर्व विकारहरूमा Mg पूरकको आवश्यक लाभहरू अझै स्पष्ट गरिएको छैन।
म्याग्नीशियमको कमीका सामान्य लक्षणहरूमा मांसपेशीको जुम्ला, डर र थरथरहरू शामिल छन्। यद्यपि, पूरकहरूले यी लक्षणहरूलाई कम गर्न सक्ने छैनन् जो कम छैनन्।
प्रारम्भिक पार्किन्सनको अध्ययनले मस्तिष्कको मोटर मोटर गिरावट, न्यूरोनल नोक्सानी पुग्न म्याग्नीशियम फाराम पत्ता लगायो।
कम म्याग्नेशियमको प्रारम्भिक लक्षणहरूमा समावेश छ:
जब म्याग्नीशियमको अभाव बढ्दै जान्छ, लक्षणहरूमा समावेश हुन सक्छ:
मांसपेशियों को पीडा
व्यक्तित्व परिवर्तन हुन्छ
प्रयोगात्मक र थेरापीटिक मेडिसिनमा प्रकाशित एउटा अध्ययनमा अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाए कि हल्दीले पार्क्सनन रोगमा स्नायु प्रणालीको ह्रास हुने विषाक्त पदार्थहरूबाट स्नायु प्रणालीलाई बचाउन सक्छ।
औषधी परिवर्तन, संक्रमण, डिहाइड्रेशन, निन्द्राको अभाव, भर्खरको शल्यक्रिया, तनाव, वा अन्य चिकित्सा समस्याहरूले पीडी लक्षणहरू बिगार्न सक्छ। मूत्र पथ संक्रमण (मूत्राशय लक्षण बिना पनि) एक विशेष साधारण कारण हो। सुझाव: केहि औषधीहरूले PD लक्षणहरू बिगार्न सक्छन्।
एउटा नयाँ अध्ययनले सुझाव दिन्छ कि तपाईको म्याग्नीशियमको सेवनलाई बढाउँदै अन्धकार पत्तेदार तरकारीहरू र केहि फलफूल, सिमी र नटहरू पाइने खनिज पदार्थले बुढेसकालसँग सम्बन्धित मेमोरी ल्याप्सनमा लड्न मद्दत गर्दछ।
यसको अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका मध्ये एक भनेको शरीरको अक्सिजन क्षमता बढाउँदै धीरज निर्माण गर्न सहयोग गर्नु हो। तर यसले निम्नसँग मद्दत गर्दछ: स्वस्थ रक्तचाप।
अनुसन्धानले सल्लाह दिन्छ कि म्याग्नीशियमको साथ पूरकले सेरोटोनिनको स्तर बढाउन मद्दत गर्दछ। वास्तवमा, म्याग्नीशियमको कमीका बिरामीहरूमा कम सेरोटोनिन स्तर देखिएको छ। अध्ययनले म्याग्नीशियमको साथ सेरोटोनिन जुटाउने बारेमा छलफल गरेको छ।
म्याग्नेशियमले शरीरमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ, जस्तै मांसपेशिहरु र स्नायु समारोह र उर्जा उत्पादनलाई समर्थन गर्ने। कम म्याग्नीशियम स्तरले छोटो अवधिमा लक्षण पैदा गर्दैन। यद्यपि, लामो स्तरको कम स्तरले उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, टाइप २ मधुमेह र अस्थिरोगको जोखिम बढाउन सक्छ।
प्राकृतिक जीवन शांत गम्मीहरू।
अब फूड्स मैग्नीशियम साइटरेट भेज क्याप्सुलहरू।
भिटाफ्यूजन म्याग्नेशियम गमी भिटामिन।
जीवन विस्तार न्यूरो-मैग म्याग्नेशियम L-Threonate।
Magtein Magnesium L-Threonate।
BioSchwartz मैग्नीशियम बिस्लिसाइनेट।
डाक्टरको सर्वश्रेष्ठ उच्च अवशोषण १००% चेलेटेड म्याग्नेशियम ट्याब्लेटहरू।
म्याग्नेशियम ग्लासिनेटलाई निम्न प्रकारका बिभिन्न सुविधाहरू हुने देखाइएको छ: ग्लाइसिनको उपस्थितिको कारण यसले तपाईंको दिमागमा शान्त प्रभाव पार्छ। यसले चिन्ता कम गर्न र राम्रो निद्रा बढाउन मद्दत गर्दछ। यसले स्वस्थ हड्डी घनत्व कायम गरेर हड्डीहरूलाई बलियो राख्न मद्दत गर्दछ।
त्यहाँ म्याग्नेशियमका धेरै प्रकारहरू उपलब्ध छन्, हामी प्राय: म्याग्नीशियम साइट्रेट र / वा म्याग्नेशियम ग्लाइसिनेट प्रयोग गर्न रुचाउँछौं। चिन्ता, अनिद्रा, दीर्घकालीन तनाव, र भ्रामक अवस्था जस्ता सर्तहरूको लागि म्याग्नीशियम ग्लासिनेट फारम अधिक उपयोगी छ।
निद्राका लागि म्याग्नीशियम ग्लाइसिनेट अर्को ठूलो प्रकारको म्याग्नेशियम हो। यो म्याग्नेशियमको सबैभन्दा राम्रोसँग अवशोषित रूप हो, र पेटमा कोमल छ, त्यसैले यसले रेचक प्रभाव पार्ने वा तपाईंको पेटलाई दु: ख दिने सम्भावना कम हुन्छ।
यो औषधि रगतमा म्याग्नीशियमको कम मात्रालाई रोक्न र उपचार गर्न प्रयोग गरिने खनिज पूरक हो। केहि ब्रान्डले धेरै पेट एसिडको लक्षणहरू जस्तै पेटको दुखी, ईर्ष्या, र एसिड अपचको उपचार गर्न पनि प्रयोग गर्दछ।
जे होस् म्याग्नीशियम पूरकहरू सामान्यतया सुरक्षित मानिन्छ, तिनीहरूलाई लिनु अघि तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग जाँच गर्नु पर्छ - विशेष गरी यदि तपाईको चिकित्सा अवस्था छ भने। खनिज अनुपूरक व्यक्ति को लागी असुरक्षित हुन सक्छन जसले केहि मूत्रवर्धक, हृदय औषधी, वा एन्टिबायोटिक लिन्छन्।
यदि तपाईं म्याग्नीशियम लिनु अघि कुनै औषधि लिइरहनुभएको छ भने आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग जाँच गर्नुहोस्। जोखिमहरू। मधुमेह, आन्द्रा रोग, हृदय रोग वा मृगौलाको रोग भएका व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नु अघि म्याग्नीशियम लिनुहुन्न।
म्याग्नीशियमको कमीको पहिलो लक्षणहरूमध्ये अक्सर एउटा थकान हो। तपाईंले मांसपेशिको ऐंठन, कमजोरी वा कठोरता पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। प्रारम्भिक चरणमा भोक र मतली कम हुनु अन्य साधारण लक्षणहरू हुन्। यद्यपि तपाईले सुरुमा कुनै पनि लक्षण देख्न सक्नुहुन्न।
यदि तपाइँ निद्रा सहायताको रूपमा म्याग्नीशियम पूरकहरू प्रयोग गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने हामी यसलाई ओछ्यानमा जानु भन्दा १-२ घण्टा लिन सिफारिस गर्दछौं। तपाइँको निद्रा तालिकामा म्याग्नीशियम थप गर्ने विचार गर्नुहोस्।
खनिजहरूको ठूलो खुराक एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ अवशोषित गर्न। एकै समयमा क्याल्सियम, जिंक, वा म्याग्नेशियम पूरक प्रयोग नगर्नुहोस्।
म्याग्नेशियम एल Threonate उचाई को मूड, busting तनाव, र कम चिन्ता सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, पेन फिजिशियन जर्नलमा प्रकाशित गरिएको अर्को कागजमा भेट्टाए कि म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट क्रोनिक न्यूरोपैथिक पीडासँग सम्बन्धित मेमोरी घाटालाई रोक्छ र यसको विपरीत गर्दछ।
तरलमा राम्रोसँग विघटन हुने म्याग्नेशियमका फार्महरू कम घुलनशील प्रकारको भन्दा पेटमा पूर्ण रूपमा अवशोषित हुन्छन्। साना अध्ययनहरूले पत्ता लगाए कि एस्पारेट, साइट्रेट, ल्याक्टेट, र क्लोराइडमा रहेको म्याग्नीशियम पूर्ण रूपमा अवशोषित हुन्छ र म्याग्नीशियम अक्साइड र म्याग्नेशियम सल्फेट भन्दा बढी जैव उपलब्ध हुन्छ।
दैनिक 350 350० मिलीग्राम भन्दा कम खुराक प्रायः वयस्कहरूको लागि सुरक्षित हुन्छ। केहि मानिसहरुमा म्याग्नीशियमले पेटको अस्वस्थता, मतली, बान्ता, पखाला, र अन्य साइड इफेक्ट हुन सक्छ। जब धेरै ठूलो मात्रामा लिन्छन् (दैनिक XNUMX XNUMX० मिलीग्राम भन्दा बढी), म्याग्नेशियम POSSIBLY UNSAFE हो।
म्याग्नेशियम एक महत्त्वपूर्ण खनिज हो जुन तपाईंको स्वास्थ्यको धेरै पक्षहरूमा संलग्न छ। नेशनल एकेडेमी अफ मेडिसनले सिफारिश गर्दछ कि प्रति दिन mg mg० मिलीग्राम पूरक म्याग्नेशियम नाघ्नु हुँदैन। तपाईले दिनको कुनै पनि समयमा शरीरलाई सुधार्न म्याग्नीशियम लिइरहनुभएको छ वा छैन भन्ने कुराको बाबजुद तपाईले उनीहरूलाई निरन्तर लिन सक्नुहुनेछ।
क्याल्सियम युक्त खाद्य पदार्थहरू घटाउने वा बेवास्ता गर्ने दुई घण्टा अघि वा पछि म्याग्नेशियम युक्त खाना खानुहोस्।
उच्च-खुराक जिंक पूरकहरूलाई बेवास्ता गर्दै।
भिटामिन डी को कमीको उपचार गर्दै।
उनीहरूलाई पकाउनुको सट्टा कच्चा तरकारीहरू खाँदै।
म्याग्नेशियम एक महत्त्वपूर्ण खनिज हो र शरीरले यसलाई 300०० विभिन्न मेटाबोलिक प्रतिक्रियाहरूमा प्रयोग गर्दछ। यो मानव शरीर भित्र चौथो सबैभन्दा प्रचुर मात्रामा तत्व हो। शरीरले रक्तचाप नियमन, मांसपेशी संकुचन, स्नायु संकेत प्रसारण र ऊर्जा उत्पादन को लागी म्याग्नीशियम प्रयोग गर्दछ। किनकि म्याग्नेशियम यस्तो महत्त्वपूर्ण खनिज हो, यसको अभावले विभिन्न रोगहरू निम्त्याउन सक्छ, जस्तै माइग्रेन, टाइप २ मधुमेह, मुड डिसअर्डरहरू र बिभिन्न हृदय रोगहरू। यो खनिज तरकारी, बदाम, गेडागुडी र फलफूललगायत बिभिन्न प्राकृतिक स्रोतहरूबाट लिन सकिन्छ भने विश्वव्यापी जनसंख्याको दुई तिहाई यसको कमीले ग्रस्त छ। यो यस्तो छ कि मानिसहरूलाई प्राय: पूरकको रूपमा म्याग्नीशियम सेवन गर्न सल्लाह दिइन्छ। त्यस्तै एउटा मैग्नीशियम पूरक जसले हालसालै ठूलो लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ म्याग्नीशियम एल-थ्रोनेट।
यस लेखमा हामी तपाईलाई म्याग्नीशियम एल-थ्रोनेटको बारेमा थाहा भएका सबै कुरा भन्छौं र किन तपाईले उपभोग गर्नु पर्छ। त्यसोभए, पढ्नुहोस्।
अनुसन्धानले देखाउँदछ कि म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट सुरक्षित र शरीरले सहन गर्दछ जब एक दिनमा 350 XNUMX० मिलीग्राम भन्दा कम मात्रामा लिन्छ। यद्यपि म्याग्नेशियम एल-थ्रोनोटेको सेवनले साइड-इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ, जस्तै मतली, बान्ता, आदि। यदि तपाईं यी लक्षणहरू मध्ये कुनै पनि अनुभव गर्नुहुन्छ भने या त डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस् वा तपाईंको खुराकको मात्रा घटाउनुहोस्। म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट, जब अधिक मात्रामा लिइन्छ, शरीरमा म्याग्नीशियम निर्माण बढ्छ, जसले निम्न रक्तचाप, बढ्दो मुटुको धड्कन, श्वास बढाइ, इत्यादि जस्ता सर्तहरू निम्त्याउँछ। यसरी सुरु गर्नु अघि सधैं डाक्टरको सल्लाह लिनु उत्तम हुन्छ। म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट पूरक। यो औषधी गर्भवती र स्तनपान गराउने महिलाका साथै बच्चाहरूको लागि पनि सुरक्षित छ जब कम खुराकको मात्रामा लिन्छ।
आउनुहोस् म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेटका केहि फाइदाहरू हेरौं र यो म्याग्नीशियम स्रोतले यति उच्च लोकप्रियता किन पाउँछ भनेर बुझ्ने कोशिस गरौं।
① म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट प्रभावी रूपमा एडीएचडी फाइट गर्दछ
म्याग्नेशियम एल-थ्रोनोटेको लोकप्रियताको मुख्य कारणहरू यसको मस्तिष्क भित्र मैग्नीशियमको स्तर सुधार गर्ने क्षमता हो। यो नुन शरीर द्वारा सजिलैसँग अवशोषित भएकोले, म्याग्नीशियम मस्तिष्ककोषहरूमा पुग्ने यो प्रभावकारी तरीका हो। म्याग्नेशियमले संज्ञानात्मक स्वास्थ्यलाई बृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ - यो मस्तिष्क वृद्धावस्थाका लक्षणहरूलाई उल्टाउन सक्षम छ, जस्तै एडीएचडी वा ध्यान घाटा विकार। किनकि एडीएचडी एक सर्त हो जुन विकास गर्न समय लिन्छ, मानिसहरूलाई एडीएचडी छ भनेर थाहा हुँदैन जबसम्म यो समस्या समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ। तसर्थ, म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेटले मानसिक स्वास्थ्यलाई बढावा दिन, विशेष गरी वरिष्ठहरूको मामलामा र एडीएचडीलाई टाढा राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। (१) सूर्य, Q., Weinger, JG, माओ, एफ, र लियू, G. (२०१ 1)।
② यो एक अद्भुत मेमोरी र संज्ञानात्मक-विस्तारित पूरक हो
जब मान्छे उमेर, तिनीहरूको दिमाग पनि आकार मा संकुचन गर्न थाल्छ। यो synapses को नुकसान को कारण र उमेर सम्बन्धित संज्ञानात्मक गिरावट को परिणाम मा हुन्छ। वर्षौंको दौडान गरिएको अनुसन्धान अध्ययनहरूले देखाए कि म्याग्नीशियम एल-थ्रोनोनेटले मस्तिष्क भित्र synapses को घनत्व बढाउँछ, जसले फलस्वरूप, राम्रो स्मृति र संज्ञानात्मक कार्यतर्फ जान्छ। सरल शब्दहरूमा भन्नुपर्दा म्याग्नीशियम एल-थ्रोनेटले प्रदान गरेको म्याग्नीशियमले मस्तिष्कको बुढेसकाललाई उल्ट्याउन सक्छ र यसैले मानसिक स्वास्थ्यलाई बढावा दिन्छ, विशेष गरी वरिष्ठहरूमा।
③ यसले डिप्रेसन र चिन्तासँग लड्न मद्दत गर्दछ
डिप्रेसन र चिन्ता सामान्य समस्याहरू भएका छन्। वर्तमान COVID-19 महामारी द्वारा बनाईएको अनिश्चितताको वातावरणले यी मुद्दाहरूलाई पहिलेको भन्दा बढी सामान्य बनाएको छ। अध्ययनहरूले म्याग्नीशियम र उदासीनता र चिन्ता बीचको केही सम्बन्ध देखाएको छ। किनकि म्याग्नीशियमले स्नायु प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर गर्छ, यसले व्यक्तिलाई शान्त र आराम महसुस गराउन सक्छ। यसैले डिप्रेसन र चिन्ता दुबै हटाउन म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
④ यसले हड्डी र मांसपेशीको स्वास्थ्यलाई बढावा दिन्छ
म्याग्नीशियमको कमी पनि कमजोर हड्डी र मांसपेशीहरूको साथसाथै पेटसँग पनि सम्बन्धित छ। यसैले, अस्टियोपोरोसिसबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई अक्सर म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेटलाई म्याग्नेशियम पूरकको रूपमा लिन सल्लाह दिइन्छ। यसबाहेक, यो नुनलाई प्राय जसो दुखाइ-हटाउने औषधि पोष्ट शल्य चिकित्साको रूपमा पनि दिइन्छ।
⑤ म्याग्नेशियम L-Threonate ले मानिसहरूलाई अझ राम्रो निद्रामा पार्दछ
धेरै अनुसन्धान अध्ययनहरूले देखाए कि एक व्यक्ति राम्रोसँग सुत्नको लागि तिनीहरूसँग शरीरमा ठीक मात्रामा म्याग्नीशियम हुनुपर्छ। म्याग्नेशियमले प्यारासिम्पेथेटिक स्नायु प्रणाली सक्रिय गर्दछ, जसले सम्पूर्ण शरीरलाई आराम दिन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, म्याग्नेशियम शरीरको भित्र GABA रिसेप्टर्ससँग मिल्छ र एक व्यक्तिको स्नायु प्रणाली शान्त गर्दछ, जसले दिमाग र शरीरलाई आराम महसुस गर्दछ। म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट सुनिश्चित गर्दछ कि शरीरमा पर्याप्त म्याग्नीशियम छ रातको ध्वनि निद्राको लागि।
⑥ अन्य फाइदाहरू
माथि उल्लेखित सबै सुविधाहरू बाहेक, म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट अन्य विभिन्न उद्देश्यका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। यो नुन हिस्टरेक्टमी पछि दुखाइ कम गर्न दिइन्छ। यो पनि बन्द धमनीहरूको कारण छाती दुखाई कम गर्न प्रयोग गरिन्छ। अन्तमा, यस नुनले श्रवण हानि, फाइब्रोमाइल्जिया र मधुमेहमा पनि मद्दत पुर्‍याएको छ। केही व्यक्तिले यसलाई कोलेस्ट्रोलको स्तर कम गर्न पनि लिन्छन्।
यदि तपाईं म्याग्नेशियम एल-थ्रोनोटेट पूरकमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई एक भरपर्दो र भरोसायोग्य कच्चा माल आपूर्तिकर्ता चाहिन्छ। यदि तपाईं बल्कमा म्याग्नेशियम एल-थ्रोनोटेट पाउडर किन्नको लागि ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ भने, कप्तटेकमा किनमेल गर्नुहोस्। कम्पनी बायोमेडिकल उद्योग भित्र यसको अनुकरणीय विश्लेषणात्मक परीक्षण र गुणस्तर अनुसन्धान क्षमताको लागि परिचित छ। कफटेकसँग पनि एक अनुभवी ब्यबस्थापन टोली र एक प्रथम श्रेणी आर एंड डी टीम छ जुन विश्वभरिका विशेषज्ञहरु संग छ।
कोफ्टेक २०० 2008 मा स्थापित भएको थियो र केहि बर्ष भित्र कम्पनीले विभिन्न स्थानहरुमा आफैंको नाम सिर्जना गरेको छ, जसमा सिंथेटिक टेक्नोलोजी, औषधि पदार्थ विकास, बायोइन्जिनियरिंग, औषधि रसायन विज्ञान, आदि समावेश छ। आज, कम्पनीको उत्तर अमेरिका, भारतमा ग्राहकहरु छन्। , चीन र युरोप र यसको 'क्वालिटी बेसिस, कस्टमर फर्स्ट, ईमान्दार सेवा, म्युचुअल बेनिफिट' को नीतिले विश्वभरि खुशीका ग्राहकहरू सिर्जना गर्न मद्दत गरेको छ। कम्पनी द्वारा प्रदान गरिएको म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट २ 25 किलोग्रामको ड्रममा आउँछ र प्रत्येक उत्पादनलाई यसको उच्च गुणवत्ताको लागि भरोसा गर्न सकिन्छ। त्यसो भए, यदि तपाईलाई थोकमा म्याग्नेशियम L-Thononate पाउडर चाहिन्छ भने। cofttek.com मा पसल.
किनकि म्याग्नीशियमले क्याल्शियमको नजिकबाट काम गर्छ, यी दुवै खनिजहरूको उचित अनुपातमा हुनु महत्त्वपूर्ण छ तिनीहरूलाई प्रभावकारी बनाउन। औंठाको राम्रो नियम २: १ क्याल्सियम-देखि-म्याग्नेशियम अनुपात हो। उदाहरणको लागि, यदि तपाईले १०००mg क्याल्शियम लिनुहुन्छ भने तपाईले m००mg मैग्नीशियम पनि लिनु पर्छ।
सह-संस्थापक, कम्पनीको मुख्य प्रशासन नेतृत्व; पीएचडी फूडन विश्वविद्यालयबाट जैविक रसायनमा प्राप्त गरे। जैविक रसायन विज्ञान र औषधि डिजाइन संश्लेषणमा नौ बर्ष भन्दा बढीको अनुभव; पाँच भन्दा बढी चिनियाँ पेटेन्टहरूको साथ आधिकारिक पत्रिकाहरूमा करीव १० शोध पत्र प्रकाशित गरियो।
(1)। सूर्य, Q., Weinger, JG, माओ, एफ, र लियू, G. (२०१ 2016)। संरचनात्मक र कार्यात्मक synapse घनत्वको नियमन L-Thonate द्वारा इन्ट्रानुरोनल म्याग्नेशियम एकाग्रता को मॉडुलनको माध्यम द्वारा। न्यूरोफार्माकोलजी, १०,, 108२426-439।
(2)। मजरेकु, IN, Ahmetaj, H., Aliko, V., Bislimi, K., हल्ली, एफ।, र हल्ली, J. (२०१ 2017)। Catalase (CAT), ALT र AST को गतिविधि स्विस एल्बिनो चूहों को बिभिन्न अंगहरुमा लिड एसीटेट, भिटामिन सी र म्याग्नेशियम- L- थ्रोनोटे को उपचार द्वारा। क्लिनिकल र डायग्नोस्टिक रिसर्चको जर्नल, ११ (११)
(3)। मक्ले, GA, Hoxha, N., लुचिंगर, JL, रोजर्स, MM, र Wiles, NR (२०१))। क्रोनिक डाईट म्याग्नेशियम-एल-थ्रोनेट गति विलुप्त हुन्छ र एक कन्डिशन्ड स्वाद बिरुद्दको सहज पुनर्प्राप्ति कम गर्दछ। फार्माकोलजी बायोकेमिस्ट्री र व्यवहार, १०2013, १-106-२16।
(4)।म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट (778571 57--6-))
(5)।यात्रा अन्वेषण को लागी उदा।
(6)।Oleoylethanolamide (oea) - तपाईंको जीवनको जादुई छडी।
(7)।आनंदमाइड बनाम सीबीडी: कुन तपाईंको स्वास्थ्यको लागि उत्तम छ? तपाईंले उनीहरूको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा!
(8)।निकोोटोनामाइड राइबोसाइड क्लोराइडको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा।
(9)।Palmitoylethanolamide (मटर): लाभ, खुराक, प्रयोग, पूरक।
(10)।शीर्ष health स्वास्थ्य लाभहरू रेवेराट्रोल पूरकहरूको।
(11)।फास्फेटिडेल्सेरिन (PS) लिनका शीर्ष benefits लाभहरू।
(12)।पायरोलोक्विनोलिन क्विनोन (pqq) लिने शीर्ष5फाइदाहरू।
(13)।अल्फा gpc को सबै भन्दा राम्रो nootropic पूरक।
(14)।निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (एनएमएन) को उत्तम एन्टी एजिंग पूरक।
डा. Zeng Zhaosen
सीईओ र फाउन्डर
अब मलाई पुग्नुहोस्
मलाई मेरो टाउकोमा बिरामी महसुस गराउँछ। खुराक कम गर्न कोसिस गर्नेछ
मैले छोटो र दीर्घकालीन स्मृति बढाएको छु र म धेरै हिसाबले सन्तुलित हुन्छु। म पनि एक सानो डोपामाइन बूस्ट र एक सानो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट प्राप्त गर्दछ जुन तुलनात्मक रूपमा सुसंगत रहन्छ र मात्र न्यूनतम घट्दछ। निद्रा पर्याप्त बृद्धि गर्न सकिन्छ feel घण्टा like जस्तो महसुस गराउन तर म्याग ग्लाइसिनेटले मेरो लागि त्यो कथनलाई कन्फ्युज गर्दछ तर म अझै पछाडि उभिन्छु, केहि, निद्रा बृद्धि।
काम, ध्यान र एपिसोडिक मेमोरी, कार्यकारी संज्ञानात्मक समारोह, र समग्र तनाव र चिन्ता कम गर्नका लागि म्याग्नीशियम एल-थ्रोनेट (MgT) एक प्रभावी सूक्ष्म पोषकतत्व हो।
केही डाक्टरहरूले डिप्रेसनसँग लड्न २००० मिलीग्राम म्याग्नीशियमको पूरक सुझाव दिन्छन्।
त्यो उत्तम छ, जबसम्म मैले महसुस गरे कि म्याग्नीशियम L-Threonate BBB (रगत, मस्तिष्क, बाधा) छिर्ने कार्यमा बढी प्रभावकारी हुन्छ। यो मस्तिष्क स्पाइनल फ्लुइडमा म्याग्नीशियम स्तर मार्फत मापन गरिएको थियो। म यसलाई मेमोरी र डिप्रेसनको लागि लिन्छु।
हाउ! यो लेख धेरै राम्रो लेख्न सकिएन! यस पोष्टलाई हेर्दा मलाई मेरो अघिल्लो रूममेटको सम्झना आउँछ! उहाँ निरन्तर यसबारे प्रचार गरिरहनुभयो। म उसलाई यो पोस्ट अग्रेषित गर्न जाँदैछु। धेरै निश्चित छ कि ऊसँग एक ठूलो पढ्ने छ। बाडेको मा धन्यवाद!
थियोनेटले मलाई गहिरो निद्रामा मद्दत गर्दछ।
मैले हालसालै मेरो निन्द्रा ढिलाईको रूपमा 600०० मिलिग्राम अल्फा जीपीसी, rid०० मिलि युरीडिन, र २,००० मिलीग्राम म्याग एल-थोरियोनेट लिइरहेको छु र यसले वास्तवमै राम्रो काम गरिरहेको छ। मलाई १०-२300% बढी निन्द्रा महसुस गराउँदछ। म पनि राती उठ्दा म अझ छिटो निदाउँछु।
अस्पताल शल्य प्रविधि कार्यक्रम
सहयोगी जानकारी। भाग्यमानी मैले अनावश्यक रूपमा तपाइँको वेबसाइट फेला पारे, र म किन छक्क परें किन यो दुर्घटना पहिले भएको थिएन! मैले यसलाई बुकमार्क गरें।
समयको प्रयोग गरेर म्याग्नेशियम L-Threonate को बारे मा, २२% बिहान र ११% रातमा उत्तम काम गर्दछ।
यदि मैले अत्यधिक लिन्छ भने यो एन्टी-कग्नेटिभ हुन सक्छ, यसको उत्तम प्रभावहरू लगातार २ हप्ता पछि हुन्छन् र म सामान्य रूपमा यसलाई एक्लै प्रदर्शनमा सुधारको लागि अधिक सफलताको साथ प्रयोग गर्न सक्दिन।
मैले धेरै व्यक्तिलाई साइड इफेक्टहरू रिपोर्ट गर्दै देखेको छु जस्तै टाउको दुख्ने, अनिद्रा, कम ऊर्जा आदि।
Thiamine मैग्नीशियमको लागि एक cofactor हो, र म्याग्नेशियमको उच्च खुराक thiamine कम गर्न सक्छन्, र भोका-विपरीत।
तपाइँको म्याग्नीशियम सप्लीमेन्टहरू वा पछी थायामिन (बी -१) लिने प्रयास गर्नुहोस्, र हेर्नुहोस् कि साइड इफेक्ट अझै पनी जारी छ।
यो राम्रो छ, तर यदि तपाईं उनीहरूसँग जानुहुन्छ भने साना सुरु गर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई निन्द्रा र विकृतिले समस्या भइरहेको छ भने, म्याग थ्रोनोटेले पहिले यो बाहिर निकाल्न सक्छ। म शुरुमै बोतलमा सिफारिस गरिएको खुराकको साथ सुरू पनि गर्दिन, जुन १० हप्ताको बिस्तरको २ घण्टा पहिले हप्ताको लागि हो। यसले सम्भवतः तपाइँलाई केहि समयको लागि धुन्धमा राख्नेछ।
म ओछ्यान अघि 1-2gs लिन्छु र बिहानको एक m००mg क्याप यदि मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ।
यो प्रभावशाली छ कि तपाईं यस लेखबाट साथै यस ठाउँमा गरिएको हाम्रो संवादबाट विचारहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ।
म्याग्नेशियम L-Threonate कोष कोशिका बाह्य स्पेसबाट न्यूरन्सको इंट्रासेल्युलर स्पेसमा म्याग्नीशियमको बाढीको कारण दिन्छ। यो अन्य म्याग्नेशियम-लवणको साथ हुँदैन।
यो सुत्ने छिटो मद्दत गर्न सक्छ सो १ घण्टा पहिले ओछ्यान सिफारिस गर्नु भन्दा पहिले। तपाईंको पूरक बोतल शायद प्रति दिन 1 वा3गोली को लागी कल गर्दछ। यो किनभने मैग्नीशियम थ्रोनेट ठूलो छ, अणुको थ्रोनेट भाग ठूलो छ। अधिकतम अवशोषणको लागि दिनभर खुराक विभाजन गर्नुहोस् तर सायद तपाईंको अन्तिम खाना पछि ठूलो सेवनको लागि समय तालिका बनाउनुहोस्।
L-Threonate मस्तिष्कलाई म्याग्नेशियमको अन्य रूपहरू भन्दा सीधा असर गर्दछ।
मस्तिष्कमा सीधा प्रभाव पार्ने धेरै चीजहरूको साथ त्यहाँ गएर यसलाई अनुकूलताको अवधि हुन सक्छ त्यसैले आईडीले यसलाई समय दिनुहोस्।
सबै कुरा के हो, यस वेब साइटमा सामग्रीहरू वास्तवमा व्यक्तिको ज्ञानका लागि उल्लेखनीय छन्, राम्रोसँग, राम्रो कामका साथीहरू राख्नुहोस्।
कुनै पनि हालको अनिद्राको शीर्षमा त्यो नप प्लस उत्तेजना जुन तपाईंले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। केवल यसलाई बिहान लिनुहोस् र अबदेखि कम-मध्यम डोजमा।
जहाँसम्म म्याग-एल-थ्रोनोनेट जान्छ, मेरो बुझाइ यो छ कि एल-थ्रोनेट एक उच्च वाहक हो र म्याग्नीशियमको उच्च मात्रा सीधा मस्तिष्कमा पहुँच गर्दछ जहाँ यो न्यूरन्सले प्रयोग गर्न सक्दछ? मानौं अध्ययनहरूले यो सत्य भएको देखाएको छ। मलाई थाहा छैन कि त्यो केवल hype हो कि होइन। म एल-थ्रोनेट लिन चाहान्छु यदि म यसलाई थोकमा लिन सक्दछु, अन्यथा म केवल चेलेटको साथ टाँसिरहेको छु।
सम्भवतः २ ग्राम म्याग्नेशियम L-थ्रोनेट, १ mag2mg को एलिमेन्टल म्याग्नेशियम।
Threonate फारम अत्यधिक मस्तिष्क विशिष्ट छ र सायद यसमा कम म्याग्नीशियम भए पनि मस्तिष्क म्याग्नीशियम सामग्री बढाउनमा निकै बढी प्रभावी छ।
मैले रातमा ओछ्यान र वाहमा म्याग्नेशियम एल-थ्रोनोटेट उत्पादन लिन शुरू गरें - चार वा पाँच दिन पछि मैले रिकलमा थोरै सुधार देख्न थालें, काममा विभिन्न डाटा राख्नु, त्यसपछि धेरै हप्ता पछि, ठूला सुधारहरू जहाँ म नाम र तथ्यहरू सम्झन सक्दछु। वर्ष पहिले बाट। यो लिनु अघि, मैले साना र ठूला चीजहरूको साधारण सम्झनामा संघर्ष गरें र यो मेरो पीसीपीसँग कुरा गर्ने पर्याप्त कुरा थियो र यहाँसम्म कि एक न्यूरोलॉजिस्ट जसले मलाई "हल्का" संज्ञानात्मक कमजोरीका साथ निदान गरे र यहाँसम्म कि मलाई एक नम्बर पूर्ण गरिए जस्तो भयो। Alzheimer को अस्वीकार गर्न परीक्षणहरूको।
म तीन क्याप्सुलहरूको सिफारिश गरिएको खुराक लिइरहेको छु जसले रातोरात १ mg144 मिलीग्राम म्याग्नेशियम L-Threonate प्रदान गर्दछ। यो मेरो लागि जीवन परिवर्तन भएको छ।
एक सकारात्मक पक्ष प्रभाव यो मेरो निद्रामा सुधार भएको देखिन्छ र म अक्सर मेरो सपना अब सम्झना छ।
म लगभग १० महिनाको लागि म्याग्नेशियम L-Threonate पाउडर लिदै छु, १.० - १२.२g दैनिक। म यसलाई स्लीप एडिसको रूपमा प्रयोग गर्छु, र यो अचम्मका साथ काम गर्दछ। भन्न सक्दिन कि मैले त्यसको बाहिर कुनै प्रभावहरू देखेको छु।
म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट आश्चर्यजनक छ। तपाईं यो Magtein को ब्रान्ड नाम गुगल गर्न सक्नुहुनेछ। यसले मस्तिष्क कुहिरो हटाउँछ, चिन्ता कम गर्दछ, तपाईंलाई निद्रामा पार्दछ, चलाख बनाउँछ, र डिप्रेसनमा मद्दत गर्दछ। मेरा आमा बुबा दुबै दुबै एन्टीडिप्रेससबाट बन्द गर्न सक्षम हुनुभयो म्याग्टेनमा परिवर्तन गरेर। म यसलाई दैनिक प्रयोग गर्दछु र यो बिना पनि हुँदैन।
1g-2g सुता भन्दा एक घण्टा अघि। Time००mg दिन को उपयोग को लागी, यदि चिन्ता को लागी आवश्यक छ। यो ती पदार्थहरु मध्ये एक हो जसले वास्तवमा यसलाई हिर्काउँदा तपाईलाई हिट गर्दछ, यसको अर्थ यो उत्पादनकोलागि राम्रो हुँदैन यसमा रहँदा यसले तपाइँको दिमागलाई आराम दिईन्छ र ड्रग्सलाई अनुमति दिन्छ जुन रिसेप्टर्सलाई असर गर्छ यसले अझ राम्रोसँग काम गर्न सक्छ जब मिग्राले यो काम गरिसकेपछि। के यो अर्थ राख्छ? ओछ्यान यति महान् छ भन्दा पहिले नै तपाईले आफ्नो दिमागलाई उत्तेजनाबाट विच्छेदन दिनुहुन्छ। प्रभावहरू संचयी हुन्, तर धिक्कार्, मैले पहिलो पटक लिएको वास्तवमै साँच्चिकै त्यो भिन्नता महसुस गरें।
धेरै धेरै म्याग्नेशियमको कारण ढीला मलहरू हुन्छन्। हामी मध्ये अधिकांशको लागि, त्यो एक दिन २०० मिग्रा भन्दा बढि छ। केही व्यक्ति कुनै समस्या बिना 200०० मिलीग्राम पूरक म्याग्नेशियम सहन गर्न सक्दछन्।
मेरो सिफारिश गरिएको खुराक एक दिनको १ (144 मिलीग्राम एलिमेन्टल (शुद्ध) मैग्नीशियम हो। केहि मानिसहरु शुरुमा थोरै चिन्तित हुन्छन्, अरूले टाउकोमा रगत प्रवाहको बढ्दो अनुभूति देख्दछन्, जबकि अरूले हल्का टाउको दुखाइ लिन सक्छन्। T यदि तपाईं कब्जको लागि म्याग्नेशियम लिदै हुनुहुन्छ भने, तपाईले Mg Threonate थप्दा आफ्नो हालको खुराक जारी राख्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं ढिलो मल विकास गर्नुहुन्छ भने मिगको तपाईंको अघिल्लो फारममा काट्नुहोस्।
म तपाईंलाई मद्दत गर्न आशा गर्छु!
म्याग्नेशियम L-Threonate - तपाईंको अनुभव के भएको छ?
के कसैले यहाँ पूरकको रूपमा म्याग्नीशियम L-Threonate लिइरहेको छ? तपाईंको अनुभव के भएको छ?
तपाईंले यसलाई कति समयदेखि लिइरहनुभएको छ र कति?
यो लिनु अघि तपाईले यो लिनु अघि यो कस्तो थियो, जब तपाइँ यसमा हुनुहुन्थ्यो, र तपाइँले लिनु रोक्नुभयो भने तपाइँले गर्नुभयो भने?
मलाई लाग्छ कि यस साइटको प्रशासकले आफ्नो वेब साइटको समर्थनमा कडा मेहनत गरीरहेको छ, यस कारणले गर्दा यहाँ हरेक चीज गुणवत्तामा आधारित डाटा हो।
मैले फेला पारे कि म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट एक चिल र ध्यान केन्द्रित मानसिक प्रभावको अधिक हो, जबकि ग्लासिनेट शरीरको विश्रामको बढी हुन्छ।
मेरो विचारमा दुबै प्रयास गर्न लायक छ।
यो एमिनो एसिड रूप मा Threonate एक Acetylcholinesterase अवरोधकर्ता को रूप मा कार्य देखाइएको छ। त्यसोभए यदि तपाई कोलोन संवेदनशील हुनुहुन्छ र निराश मुड वा ह्युपरजाइन ए, अल्फा जीपीसी, माछा तेलको मेगा-डोज जस्ता पूरकबाट कुनै प्रतिकूल प्रभाव देख्नुहुन्छ भने, म म्याग ग्लाइसिनेटतर्फ लजाउनेछु।
खर्चको कारण, मैले वर्षौंको लागि म्याग्नेशियम l-थ्रोनेट प्रयोग गर्न छोडें।
तर मेरो लागि, यसले मेरो निद्रामा सुधार ल्याउँछ, मुख्य कुरा यो हो कि शान्तिको स्तर मैले दिन पछि प्राप्त गर्न सक्दछु यो लिनको पछि)।
म ग्लाइसिनेट जस्ता अन्य प्रकारका म्याग्नीशियमबाट कुनै पनि मुड / चिन्ता लाभ पाइनँ, तर व्यक्तिगत रूपमा मैले तिनीहरूलाई एल-थ्रोनेटबाट पाउँदछु।
यदि तपाईं विशेष गरी दिमागको स्वास्थ्य बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने मैग्नीशियम एल-थ्रोनेट तपाईको लागि आदर्श म्याग्नीशियम फारम हुन सक्छ।
जबकि यसले सामान्यतया शरीरभरि म्याग्नीशियमको स्तर बढाउन सक्छ, यसको प्रभाव दिमागमा अझ प्रबल हुन सक्छ।
यो सामानले काम गर्दछ, विशेष गरी निद्रा अवधि र गुणको लागि।
मैले Mg का अन्य प्रकारहरू प्रयास गरेको छु र उनीहरूले मलाई रन दिन्छन्।
मैले मेलाटोनिन, ZMA, Skullcap, 5-HTP, GABA, Gingko, Valerian, PhosphatidylSerine लाई लिएको छु, कुनैले मिग्राको L-Threonate रूपको रूपमा लगातार र प्रभावकारी रूपमा काम गर्दैन।
म्याग्नीशियम L-Threonate अनुभवहरू?
मैले भर्खरै केहि म्याग्नेशियम L-Threonate खरीद गरेको छु र यससँग महान अनुभव बाहेक केही पनि छैन। कम चिन्ता, कम मस्तिष्क कुहिरो, म एक अर्थमा 'आफैलाई' जस्तै महसुस गर्दछु, आदि। म दिन प्रति १-१.g जी को मात्रा बढ्छु।
म सोच्दै छु कि यदि कसैसँग मैग्नीशियमको रूपसँग यस्तै वा फरक अनुभव भएको छ भने?
म्याग्नीशियम L-Threonate ले मलाई आराम दिन्छ र मेरो निद्रामा मद्दत गर्दछ।
डेमेन्टियाको साथ PATIENTS मा म्याग्निशम एल थ्रीनेटको लेबल परीक्षण खोल्नुहोस्
संयुक्त राज्यमा, त्यहाँ अनुमानित .5.2.२ मिलियन अल्जाइमर रोग (AD) को रोगहरू छन्, AD र अन्य डिमेन्शियाहरूले 1 ज्येष्ठ वयस्कमा करीव १लाई असर गर्दछ। बिरामीहरूको स्याहारको बढ्दो आर्थिक र भावनात्मक बोझका साथ सुरक्षित र प्रभावकारी उपचारहरू खोज्नु आवश्यक छ। म्याग्नेशियम L-Threonate (MGT) का संज्ञानात्मक प्रभावहरुमा उदाउँदो अनुसन्धानले सुझाव दिन्छ कि पूरक AD को साथ व्यक्तिलाई फाइदा हुन सक्छ। यद्यपि सीमित, विद्यमान जनावर र मानव क्लिनिकल परीक्षण डेटा एमजीटी पूरक पछि न्यूरल र संज्ञानात्मक परिणामहरूको सम्बन्धमा, एमजीटी प्रभावहरूको म्याकेनिष्टिक व्याख्या उदय हुन थालेको छ, एनएमडीएआर सaling्केत मार्गहरू अपग्रेड सहित। हालको खुला लेबल परीक्षणले हल्का देखि मध्यम पागलपनका बिरामीहरूमा एमजीटी प्रयोगको प्रभावहरू पत्ता लगायो। १ executive एफ-एफडीजी-पीईटी इमेजि,, संज्ञानात्मक परीक्षण, र रगत ड्रु base्ग भयो १ executive एफ-एफडीजी-पीईटी इमेजिंग, उपचारको १२ हप्तामा हिप्पोकैम्पल र प्रिफ्रन्टल कोर्टेक्स मध्यस्थतायुक्त संज्ञानात्मक क्षमतामा कार्यकारी कार्य, ध्यान, प्रशोधन गति सहित एमजीटी पूरकताको गहन प्रभावको मूल्यांकन गर्न। , मौखिक प्रवाह र मेमोरी। संज्ञानात्मक परीक्षण र रगत ड्रॉहरू पनि MGT विच्छेदको weeks हप्ता पछि गरिएको थियो। एमजीटी उपचारको १२ हप्ता पछि कुल नमूनामा संज्ञानात्मक कार्यको वैश्विक सूचकांकमा सुधारको साथसाथै क्षेत्रीय मस्तिष्क मेटाबोलिज्ममा निष्कर्षहरूले उल्लेखनीय सुधार देखायो। रातो रक्त कोशिका म्याग्नेशियमको स्तर बढेको समग्र अनुभूति र केहीमा कार्यकारी कार्यमा सुधार ल्याइएको थियो तर सबै बिरामीहरूलाई भनेका थिएन। ठूला प्लेसबो नियन्त्रित क्लिनिकल परीक्षणहरू एमजीटीलाई एक प्रभावकारी, सजीलो पहुँचयोग्य र सस्तो उपचार पूरकको रूपमा एडी भएका व्यक्तिहरूको लागि मूल्या evalu्कन गर्न आवाश्यक छ।
पुरानो वयस्कहरूमा संज्ञानात्मक कमजोरीको उपचारको लागि एमएमएफएस -१० को प्रभावकारिता र सुरक्षा, साइनाप्स डेन्सिटी बृद्धि गर्ने: एक अनियमित, डबल-ब्लाइन्ड, प्लेसबो-नियन्त्रित परीक्षण。
किताबको तुलनामा नेटमा कुनै पनि कुरा पत्ता लगाउन यो धेरै समस्यामुक्त छ, किनकि मैले यस वेबसाइटमा यो लेख फेला पारेँ।
अति उत्तम! यसको वास्तविक आश्चर्यजनक लेख, मैले यस लेखबाट धेरै स्पष्ट विचार पाएको छु।
म्याग्टेन (एल-थ्रोनेट) खुराक प्रश्न？
नमस्ते, म ती व्यक्तिहरूका लागि आश्चर्यचकित छु जसले विगतमा म्याग्टेन वा एल-थ्रोनेट प्रयोग गरेका थिए, उनीहरूको खुराक प्रति दिन के थियो, खास गरी यदि तिनीहरू म्याग्नेशियमका अन्य रूपहरू बीच घुमाउँथे।
अहिले, म प्रति दिन ~ 3600~०० मिलीग्राम ग्लाइसिनेट लिइरहेको छु (बिहान १ 1800०० मिग्रि, रातमा १ 1800०० मिग्रॅ)। लेबल अनुसार, त्यो म्याग्नीशियमको १००% भन्दा बढि दैनिक मूल्य हो, तर त्यो डोज जुन मलाई राम्रो लाग्दछ, किनभने यसले प्रायः ऐंठन र मांसपेशिको ऐंठन हटाउँछ।
म आश्चर्य पनि गर्दैछु, किनकि २०००mg Magtein केवल value 2000% दैनिक मूल्य म्याग्नेशियम हो, र २०००mg Magtein प्रति दिन सिफारिश गरिएको MAXIMUM हो, के केवल एल-थ्रोनेटबाट पर्याप्त म्याग्नीशियम प्राप्त गर्न सम्भव छ, वा मानिसहरूले यसमा म्याग्नेशियमका अन्य प्रकारहरू प्रयोग गर्दछन्? L-थ्रोनेट थप्नको लागि जब L-thonate लिनुहुन्छ?
सहयोगको लागि धन्यबाद। पहिलो पटक मेरो लागि एल-थ्रोनेट प्रयास गर्दै।
म लगभग १० महिनाको लागि ND को म्याग्नेशियम L-Threonate पाउडर लिदै छु, १.० - १.२ g दैनिक। म यसलाई स्लीप एडिसको रूपमा प्रयोग गर्छु, र यो अचम्मका साथ काम गर्दछ। भन्न सक्दिन कि मैले त्यसको बाहिर कुनै प्रभावहरू देखेको छु।
स्रोत Naturals मैग्नीशियम एल Threonate? म्याग्नेशियम एल थेरोनेट पेटन्ट गरिएको छ यदि यो वास्तविक म्याग हो भने। यो उही सूत्र हो कि ब्राण्डको बेवास्ता बिना यसलाई बेचेको छ।
म्याग्नेशियम l थ्रोनेट?
जहाँसम्म मलाई थाहा छ, एल-थ्रोनेट स्पष्ट रूप र फोकसको लागि न्यूरो ट्रान्समिशनलाई बढावा दिने एक रूप हो। मांसपेशिको तनाव / ऐंठन र रक्तचाप नियमनको लागि ग्लाइसिनेट। शान्तिको लागि साइट्रेट र नियमितताको साथ मद्दत गर्न सक्छ।
तपाईले वर्णन गर्नु भएको लक्षणको लागि म साइट्रेट पाउनेछु।
म्याग्नेशियम तपाईको शरीरमा एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट हो त्यसैले यसलाई त्यहाँ दैनिक प्राप्त गर्नुहोस्।